ट्रकको टायर मुनिवाट नयाँ जिवनको भिख माग्दा , आफनो कथा आफनै व्यथा | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← आफनै कलम आफनै भाव कारवाही होला त विएण्डविलाई ?	काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सरकार गठनका लागि सबैसँग छलफल गछौँ : काङ्ग्रेस , कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै विवाद छैन, कोइराला, →	ट्रकको टायर मुनिवाट नयाँ जिवनको भिख माग्दा , आफनो कथा आफनै व्यथा	14
आज जेष्ठ ३१ गते ठिक आज भन्दा एक वर्ष अगाडी काठमाण्डौको वालाजुमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटना पछि मैले दाहिने गोडा सदाको लागि गुमाउनु पर्यो । उपचारको लागि राजधानीको विएण्डवि अस्पतालमा गएको भएपनि अस्पतालको लापरवाहीले मैले गोडा गुमाउनु पर्यो । मेरो वा३१ प १८२१ नम्वरको मोटरसाइकललाई ना२ख८६२९ नम्वरको ट्रकले मेरो मोटरसाइकललाई पछाडीवाट ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटना पछि मेरो मोटरसाइकलको पछाडी रहेको एक जना साथीको विएण्डवि अस्पतालमा निधन भयो । संगै दुर्घटना भएको म भने दाहिने गोडा गुमाएर उपचार गराइरहेको छु । अझै मेरो कृतिम गोडा राखेर हिडन २,३ महिना लाग्ने छ । आज यो दुखद घडीमा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनु परेको मेरो साथीको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु ।
मानिसलाई दैवनै लागे पछि कस्को पो के लाग्ने रहेछर । म स्मरण गर्दछु आज भन्दा एक वर्ष अगाडीको मेरो जिवन कस्तो थियो ? आज म कुन अवस्थामा रहनु परेको छ । दुर्घटना पछि वाँच्नको लागि मैले धेरै संघर्ष गर्नु पर्यो । आजको दिनमा मैले एउटा कुरा भन्ने नै हिम्मत गरेको छु । विएण्ड वि अस्पताल र सवारीको तर्फवाट मलाई मिलेर हत्या गर्ने योजना रहेको थियो । त्यो किन र कसरी भन्ने कुराको एक एक प्रमाणहरु मैले तल उल्लेख गरेको छु पुरै यो लेख पढनु होला । म एक पत्रकार भएको कारणलेनै मलाई मार्ने प्रयास भएको थियो । किन कि सो ट्रकले मलाई सिधै ठक्कर दिएको थियो । उसको गल्ती भएको र भोली वाँचेमा उनिहरुमाथी मैले वदला लिन सक्ने भन्दै मलाई मार्ने प्रयास भएकै हो ।
दुर्घटनावाट मेरो दाहिने गोडामा ट्रकले किचेको थियो घुडा भन्दा केहि तल त्यस पछि मेरो पैताल र गोडाको औलाहरु राम्रो संग चलिरहेको थियो । तर अचानक उपचारको क्रममा विएण्डवि अस्पतालले मेरो गोडा काटनुपर्ने वतायो । त्यस पछि मेडिकेयर अस्पतालमा आएपछि मेरो गोडा काटिएको हो । कसैको कल्पना वाहिरको कुरा हो अस्पतालले यसरी सवारीधनी संग मिलेर मानीसलाई मार्न पनि पछि पदैन भन्नेमा । म त्यसको सवुत प्रमाण हुं मेरो कलम चल्छ मेरो कुरा सुनिन्छ त्यसैलेनै यो सवै कुरा लेख्दै छु तर विएण्डविवाट धेरै मानिसहरुको जिवन ववाद भएको छ त्यो वाहिर आउन सकेको छैन् ।
म एउटा पत्रकार हु मेरै साथीहरु प्रति मेरो गुनासो हुने गरेको छ यदि विएरका वोतल र मासु सहित होटलमा डिनर भयो भने हाम्रा साथीहरुको जमघट हुन्छ समाचार पनि वन्छ । मेरो दुर्घटना पछि मैले फोन गरेर नेपालका धेरै पत्रकार मित्रहरुलाई वोलाए तर उनिहरु विएण्डविको विरुद्धमा कलम चलाउन सकेनन् । एउटा पिडीत पत्रकार साथीको कुरालाई लेख्न सकेन यो किन ? यो तपाँइहरुले वुझनु पर्ने कुरा हो ।
मैले पत्रकारीता यात्रामा धेरैको समाचार लेखे । आफनो तर्फवाट सक्ने सहायोग पनि गरे । तर म आज आफै पिडीत भएर समाचार वनेर उपस्थीत भएको छु । तर मेरो विषयमा मेरा पत्रकार साथीहरुले आवाज उठाइदिएनन् । आज म फेसवुकवाट अनुरोध गरेर मेरो कृतिम गोडाको लागि उपचार गर्न सहायोग माग्न वाध्य भएको छु किन कि मेरो पक्षमा कसैले वोलिदिएन् । म नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पार्षद पनि हु । पत्रकार महासंघले उपचारको लागि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत फायल मन्त्री परिषदमा दर्ता भएको छ यो राज्यले मेरो निम्ती निर्णय गर्न सक्दैन यो किन ? एक जना नेता मस्तीको लागि देश विदेश घुम्छ अनि उसको भ्रमणको लागि राज्यले लाखौ रुपयाँ दिन्छ नेता विरामी हुन्छ उपचार राज्यको ढुकुटीवाट खर्च गरिन्छ । आज म जस्ता हजारौ नेपालीहरु आर्थीक अभावले उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । किन यो राज्यले उनिहरुको निम्ती केहि गर्न सक्दैन त । ५० औ लाख पर्ने पजेर चढेर हिडने नेताहरुले राज्यवाट पैसा लिएर उपचार गर्छन । तर एउटा नेपालीको छोरा छोरी विरामी पर्यो भने किन यो राज्यले सहयोग गदैन मेरो राज्य प्रति गुनासो पनि हो ।
यो देशमा विदीको सासन छैन पनि ठुलाले जे गरेपनि हुने यो देशमा हामी जस्ता मानिसको कुनै स्थान हुदैन् । मलाई ठक्कर दिएर घाइते वनाउने र एक जनाको मृत्युपनि भएको केसमा दुर्घटना गराउने गाडीका चालक ३,४ दिन जेल वसे गाडी धनिले उनिलाई पैसा तिरेर निकाली दिए उनि फेरी गाडी हाँकेर हिडन थालीसके । यो देशमा कहाँ जनताको पक्षमा कानुन छ ? कमसे कम १ वर्ष मात्र ड्राइभरलाई जेल हाल्न सकियो भने यसरी मानीसलाई ठक्कर दिएर मार्ने स्थीति त हुने थिएन् ।
त्यसैले आज म आफनै पिडाले वाँचीरहेको छु । त्यसैले मेरो उपचार र कृतिम गोडाको लागी आज मानविय नाताले तपाँईहरुले सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने आसामा रहेको छु । मेरो विस्तृत विवरण यसै वेभ साइटमा रहेको छ । Like this:Like Loading...
← आफनै कलम आफनै भाव कारवाही होला त विएण्डविलाई ?	काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सरकार गठनका लागि सबैसँग छलफल गछौँ : काङ्ग्रेस , कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै विवाद छैन, कोइराला, →	One response to “ट्रकको टायर मुनिवाट नयाँ जिवनको भिख माग्दा , आफनो कथा आफनै व्यथा”	Jamuna Subedi	जुन 17, 2010 at 9:15 बिहान	दाई, मलाई यो घटनाले निक्कै स्तब्ध बनाएको छ….मैले पनि यही नियती १५ बर्ष पहिले भोगेको थिए र दुबै खुट्टा गुमाएकी पनि छु…तर मेरो सोच र रविन दाजुको सोच भने फरक छ होला कि जस्तो मलाई लाग्यो….मैले नियतीलाई सरापेको छैन नत त्यो मनिसलाई जस्ले मेरो बलापन अनी योबन पनि छिन्यो। म त निक्कै खुशी छु यो घटनाले मलाई अपाङ्ग बनाएकोमा किनकी मैले संसार कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्ने अवसर पाएको छु। म अस्तिक त होइन तर नास्तिक पनि छैन यदी भगवानको अस्तित्व छ भने उनले १००% मप्रती न्याय गरेका छन भन्ने कुरामा म विश्वात छु… सामान्य हिड्डुल गर्न सक्ने मानिस( अपाङ्गता नभएको मानिस) भन्दा फरक जीवन तर बिल्कुल नयाँ जीवन पाएको छु….. हुन त मेरो देब्रे खुट्टा डाक्टरको लापर्वाहीले घुडा भन्दा निक्कै माथिबाट काट्नु परेको थियो अनी दाहिने खुट्टा घटनाकै क्रममा छिनिएको थियो। मलाई मेरो खुट्टा गुमाएकोमा अपसोच कहिलै भएन र शायद कहिल्यै हुने पनि छैन किन कि मेरो बाँच्न पाउने नैसर्गिक हक खोसिएको थिएन..
हुन त मेरो घटना हुँदा चालकवालाले सवारीको पाङ्रामा मेरो खुट्टा पुगेको नदेखेकाले मलाई ब्याक गरी फेरी शरीर माथि सवारी कुदाइएन र भाग्यवस मलाई मेरो बुवाले बचाउन सफल हुनु भयो। म सानो छँदा जब मेरो जस्तो घटना दोहरिएको खबर सुन्थे मन वेचयन हुन्थ्यो अनी सोच्थे चालकलाई मृत्‍यु सजाय हुनु पर्ने यसरी हाम्रो जीवन बर्वाद गराइदिएकोमा तर म गलत थिए किनकी त्यो मेरो अपरिपक्क जीवनका गुनासामत्रा थिए । अहिले मलाई लाग्छ यस्ता घटना दोहरी रहनुमा कतै हामी आँफै पनि जिम्मेवार त छैनौ? कतै हाम्रो कारणले चालकवालाहरु सवारी ब्याक गरी कैयौ मानव जीवनको बाँच्न पाउने हकलाई विवसभै कुल्ची रहेका त छैनन????
यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा मात्र के हो भने हाम्रा बिकासका पुर्वाधारहरु के साच्चै मानव रक्षा गर्ने किसिमका छन त! के रक्षा विहिन पुर्वाधारहरु बाट घटेका घट्नालाई माफ गर्ने र बरु त्यस्ता घटनालाई कम गर्नप्रती चासो देखाउने सँस्कार हामीसँग छ त? यो कुरामा हाम्रो ध्यान किन जान सकेन र अब पनि गएन भने हामी अझै धेरै मानवीय क्षतीका जिम्वेवार हुने छौ । कमी हाम्रो कानुनमा छ, हाम्रो संस्कारमा छ , हाम्रा पुर्वधारहरुमा छ अनी हाम्रो सम्वेदनशिलतामा…
कतै हामीले नै हाम्रा जीवनलाई संकटमा धकेली रहेका त छैनौ?सोच्ने समय आएको छ दाई त्यसैले प्रत्रकारितालाई राम्रो र मानविय रक्षाकालागी उठाउनु होला भन्ने आशा राख्दै शुभकामना दाजुको यो प्रयासलाई…